Inona No Anton’ny Famoretana Ataon’i Shina Amin’ny Raharaha Ren Zhiqiang · Global Voices teny Malagasy
Inona No Anton'ny Famoretana Ataon'i Shina Amin'ny Raharaha Ren Zhiqiang
Voadika ny 18 Marsa 2016 6:20 GMT
Ren Zhiqiang. Sary: Beijing Tsinghua Foiben'ny Oniversite CIDEG Center
Nanakombom-bava ireo Shinoa olo-malaza maro sy mpitari-kevitra an-tserasera taorian'ny tsahon'ny famoretana tamin'ny 2013 ary nanjary tsy dia niloa-peo firy manohitra ny fanjavonan'ireo mpanohitra ao amin'ny media sosialy ny mpiserasera, mahita fa lamina ara-politika vaovaon'ny fitondran'ny Filoha Xi Jinping ny famoretana ireo mpanohitra ara-politika .
Nanaitra ny maro ny fanesorana vao haingana ny orinasan'ny fivarotan-tany aman-trano an'i Ren Zhiqiang izay mpanefoefo satria “taranaka mena faharoa” izy, izay nankatoavina ho komonista ny rainy ary nosokajiana ho sady tia tanindrazana no olona mahatoky ny Antoko Komonista Shinoa (CCP).
Nahazo ny anaram-bositra “ilay Tafondro” na “Donald Trump an'i Shina” i Ren noho ny heviny feno fihantsiana sy ny tsikera mivantana ataony amin'ny politikan'ny fitondrana..
Nakatona tamin'ny faran'ny volana Febroary ny kaontiny Weibo, izay manana mpanjohy mihoatra ny 37 tapitrisa taorian'ny fahasahiany naneho hevitra amin'ny politika ara-mpampitam-baovaon'i Xi mitaky ny fitokisan'ny [mg] fampahalalam-baovaom-panjakana rehetra ny antoko.
Nanjary fitsapan-kafanana ara-politika mikasika ny toe-tsain'i Xi manoloana ireo fahasamihafana ara-poto-kevitra misy ao anivon'ny antoko ny raharaha, miaraka amin'ny fampanginana an'i Ren, ka lasa mampanontany raha misy olona afaka manasokajy ny tenany ho tsy misy ahiana amin'ny fanadiovana [olona] ara-politika rahatrizay.
Talohan'ny nanomezan'ny Fitantanana ny tontolon'ny aterineto ao Shina baiko ny vavahadin-tserasera media sosialy lehibe Sina sy Tencent mba hamafa ny kaontin'i Ren, efa lasibatry ny fampielezan-kevitra fanaratsiana notarihin'ny Qianlong, fampahalalam-baovao miasa eo ambany fanarahamason'ny departeman'ny fampielezan-kevitra ao amin'ny komitin'ny Antoko Komonista Foibe Beijing mivantana i Ren.
Nametaka anarana an'ity mpandraharaha ity ho mpanohitra ny antoko sy niampanga azy ho manao toha-kevitra kapitalista ary manohy ny fandresen-dahatra ho amin'ny lalàmpanorenana tandrefana ny lahatsoratra iray, mitondra ny lohateny hoe “Iza no nanome fitokisana an'i Ren mba hanohitra ny Antoko?”.
Ny hafa kosa nivazavaza azy ho tsy niaro ny tombontsoan'ny Antoko Komonista ary nampitandrina fa “izay fikasana fanakorontanana sy miteraka fankahalana dia hiharan'ny fanoheram-bahoaka, ary ny fampianaran'ny mpiserasera azy ny leson'ny komonisma no porofo tsara indrindra amin'izany.”
Gazetiboky hafa malazan'ny antoko, Soratanana Saina Mena niampanga an'i Ren sy ny roa hafa ho mampiely lahateny “mamely ny antoko” amin'ny alalan'ny Weibo.
Ny anara-petaka ara-politika toy ny “mamely antoko”, arahin'ny fandrahonana fa ‘hampianatra lesona azy ” ny vahoaka dia toa fampahatsiahivana hafahafa ny fanadiovana ara-politka nandritra ny Revolisiona ara-Kolontsaina nanomboka tamin'ny 1966, ary nafotaka nandritra ny folo taona talohan'ny nahafatesan'ny filoha Mao Zedong.
Lehilahy goavana be vava
Teraka tamin’ ny 1951, hafa amin'ireo mpanohitra tamin'ny taonjato faha-21-n'i Shina i Ren Zhiqiang.
Tahaka an'i Xi Jinping, taranaka voalohan'ny mpikambana tao amin'ny antoko komonista shinoa ny ray aman-dreniny. Minisitra lefitry ny varotra tao Shina tamin'ny taona 1970 ny rainy Ren Quansheng, raha filohan'ny antoko miaramila tao amin'ny Tafi-panafaham-bahoaka nanomboka ny taona 1969 hatramin'ny 1981 kosa i Ren Zhiqiang alohan'ny nidirany tamin'ny fanangana-trano miaraka amin'ny fanjakana. Nandritra ny 1993-2014, filohan'ny Vondron'Orinasa goavana Huayuan momba ny varotra tany aman-trano izy. Amin'ny maha goavan'ny varotra tany aman-trano azy, manao fanehoan-kevitra momba ny tsenan'ny tany aman-trano ao amin'ny media sosialy izy.
Tamin'ny 2009, niteraka tsikera marobe ny fanehoan-keviny hoe «izay rehetra tsy mahazaka trano ao an-tanàna dia tokony hiverina any ambanivohitra”, voatoraka kiraro izy tamin'ny diany hamonjy ny fivorian'ny fikambanana momba ny tany sy trano tamin'ny 2010.
Taona vitsivitsy izao, nanitatra ny fahalianany mankany amin'ny politika izy. Nandritra ny kabariny tao amin'ny Oniversite Beijing tamin'ny 2013, nandrisika ny mpianatra mba handrodana ny rindrina sy hanangana rafitra sosialista demokratika izy. Ny fanehoan-kevitra no nahitana ny fametahan'ny mpitondratenn'ny antoko anarana azy ho mpahay lalàmpanorenana tandrefana. Tamin'ny herintaona, raha nanatrika ny fivoriana isan-taona fanaon'ny mpahay toe-karena Shinoa 50 voalohany izy dia nampitandrina ny antoko manoloana ny politika henjana atao amin'ny mpanohitra sy ny soatoavina tandrefana izy ary naneho ny ahiahiny mikasika ny mety hiverenan'ny Revolisiona Ara-kolontsaina.
Tamin'ny volana Septambra, namoaka lahatsoratra tao amin'ny kaontiny Weibo i Ren hiampangana ny teny filamatry ny komonista “Vonona Ho Mpandimbin'ny Komonista» navoakan'ny Ligin'ny Tanora Komonista, miampanga ny Ligy ho namitaka azy am-polony taona sy mbola manohy amin'ny famitahana ny tanora. Tamin'ny 1 Oktobra, Fetim-pirenena Shinoa, nilaza tao amin'ny Weibo izy fa tsy nanamarika ny fahaterahan'ny firenena iray ny daty fa manamarika ny fahaterahan'ny governemanta komonista vaovao izay nitsangana tamin'izany daty izany tamin'ny taona 1949. Na dia marina ara-teknika aza, dia noraisina ho fihetsika fampisarahana ny antoko sy ny fanjakana ny fanehoan-keviny, fomba fanao mankany amin'ny korontana ara-politika.
Hita ho andiany farany ny tsikeran'i Ren amin'ny politikan'i Xi amin'ny media.
Aza avela hamelana ny voninkazo an-jatony
Tsy miafina fa ahitana tsy fitovian-kevitra lehibe ao anatin'ny Antoko Komonista Shinoa manoloana ny fiovana ara-politika mihatra amin'i Shina. Misy ny mpahay lalàmpanorenana, miaro ny isian'ny demokrasia kokoa ao anatin'ny antoko, ary misy ny mino ny famoriam-pahefana Maoista. Mba hisorohana ny ady an-tranon'ny antoko, nambara tamin'ny 22 Oktobra 2015 ireo fitsipika vaovao mifehy ny mpikambana ao amin'ny Antoko Komonista Shinoa, izay mamaritra fa “ny adihevitra tsy sahaza amin'ny politikan'ny governemanta foibe” dia mety hiteraka fandroahana mpikambana ao amin'ny antoko.
Misy ny mitsinjo fa ho voaroaka ao amin'ny Antoko Komonista Shinoa noho ny tsikera fanamarihany i Ren. Na izany aza, tsy ankasitrahan'ny rehetra ny fanapahan-kevitra toy izany. Tsai Xia, mpampianatra avy ao amin'ny Sekoly Foiben'ny Antoko nanasongadina fa mety misy fiantraikany eo amin'ireo mpikambana 80 tapitrisa mahery ao amin'ny antoko ny fitantanana ny raharaha Ren:
Ahoana no fitantanana ny fiantraikan'ny fanehoan-kevitr'i Ren Zhiqiang izay tsy miantraika amin'i Ren ihany. Mifandray mivantana ny amin'ny tokony hiarovana ny zon'ireo mpikambana 80 tapitrisa mahery izany […] Ny fananganana rivotra demokratika ahafahan'ireo mpikambana 80 tapitrisa mahery maneho ny heviny no fomba tsara hitiavana sy hiarovana ny antoko. Manohintohina ny fahalalahana miteny sy manimba ny antoko ny marika ara-politika. Tsy tokony handinika izay tokony atao ankehitriny ve ireo gazetiboky sy tranonkala mifandray amin'ny antoko?
Notoroana hevitra i Tsai Xia nanomboka teo mba tsy hiresaka Ren saingy toa nilaza ny loharanom-baovao fa nomen'ireo manampahefana tampony baiko ny Vaomieran'ny Antoko ao amin'ny Distrika Andrefan'i Beijing handray fepetra hamelezana an'i Ren mandritra ny Kongresy roa fanao isan-taona.
2 ora izayHong Kong (Shina)